Tag: zvemukati marongero | Martech Zone
Tag: zvemukati marongero
China, May 21, 2015 Svondo, October 4, 2015 Richard Hollis
Zana ramakumi maviri nemasere rakaona kubuda kwetekinoroji dzakawanda zvinoita kuti tikwanise kushambadzira mabhizinesi nenzira yakabatana uye ine simba kana ichienzaniswa neyekare. Kubva pamablogi, ecommerce zvitoro, pamusika pamisika kusvika pasocial media chiteshi, webhu yakava nhandare yeruzhinji yeruzivo kune vatengi kuti vatsvage uye vapedze. Kekutanga, iyo Internet yakagadzira mikana mitsva yemabhizimusi sezvo maturusi edhijitari abatsira kurongedza uye kugadzirisa
Nyika Yezvinyorwa Zvekushambadzira 2014
Chitatu, Kukadzi 19, 2014 Chitatu, Kukadzi 19, 2014 Douglas Karr
Wakambozvibvunza here kuti ndevamwe vashambadzi veadhijitari vari kuita kana zvasvika kune ekushambadzira marongero, kusanganisira blogging, kugadzira, kugovana, uye kuyera? Pamwe chete neLookBook HQ, Oracle Eloqua yakaratidza kuti vatengesi vedigital vari kupindura sei kudiwa kwemaitiro ehunhu mune ino infographic. Isu takatsvaga kuenzanisa kushambadzira zvemukati nekunzwisisa kwakanangana nemawaniro, evaridzi, uye akabhadharwa matepu enhau- ndeapi marongero evatengesi ari kutevedzera - pamwe nekuti zvemukati zvakarongwa sei parwendo rwevatengi,